Maxaa Ku Soo Kordhay: Bixitaanka Alaba, Xaalada Ramos Iyo Sheekada Messi Ee Barcelona
Home Maxaa ku soo kordhay Maxaa ku soo kordhay: bixitaanka Alaba, Xaalada Ramos iyo Sheekada Messi ee...
kusoo dhawaada Ciyaaro.com iyo Xubinta Maxaa ku soo kordhay ? oo aan ku soo qaadaneyso maalin kasta Wararka iyo Xidigaha loogu hadal heynta badanyahay warbaahinta sida Suuqa, Khilaafka kooxaha iyo Tababarayaasha.
Xaalada David Alaba ee Suuqa ayaa wali taagan waxana xidigan sheekadiisa xiiso u yaalaya madama uu leeyahya tayo wanaagsan oo kubadeed oo lagu daray in uu xur u yahay kooxaha markaasi xiiseenaya.
Hadii aan fiirino Liverpool ayaa saaka waxay u soo bandhigtay in xidiga heshiis 9 milyan ginni ku dooneyso lakin taasi uma muuqato mid Alaba uu aqbalayo xili kooxda dhibaato ka heesato dhanka Daafaca, Real Madrid waa kooxda ugu cad ee qaadan karta xidiga lakin dhibka ugu weyn ayaa ah nuuca mushaharka oo leesku fahmi waayay kuna darso xidiga waxa uu wada-hadal la furay kooxda inkastoo markii danbe la hakiyay Sababo la xiriirka mushaharkiisa. Barcelona ayaa xiisaha qeyb ka ah lakin xaalka Barca sidaa uma buurno sababta ayaa ah in kooxda la dhibaatooneysa dhaqaale hadii ay helayaan kama deerinayaan.
Xidiga sergio ramos waa mid kamid ah Xidigaha loogu jecelyahay kooxda Real madrid lakin waxay u muuqataa in buugaasi soo duubmayo sabab ay ugu wacantahay in da’diisa ay weynaatay xidigan waxana kooxda dooneysa in sanad heshiis ah siiso si haraaga ku haray uga jaf jafato lakin Ramos sheekadaasi waa uu diiday waxana uu doonayaa in ugu yaraan lasiiyo heshiis afar sano ah.
Xidiga waxaa hada loo badinayaa in uu ku biiro PSG sida warbaahinta Caalamka qortay lakin sheekada kooxaha Mareykanka iyo horyaalkaasi ayaa ah mid uusan u baahneyn.
sida ay qorayaan Warbaahinta Spain Xidiga Messi ayaa ku biiri kara Kooxda PSG lakin sheekadaasi ayaanan waxba ka jirin marka loo eego Messi madama xidigan uu jecelyahay joogitaanka Barcelona Sababo la xiriira taariikhda Kooxda inkastoo dhibka taagan uu yahay mushaharka uu qaato sanadkii.
Sheekada Ozil ee Arsenal waa mid kamid ah Wararka ugu xiisaha badan ee warbaahinta Caalamka ee ciyaaraha soo qorayaan waxana khilaafka xidigan iyo kooxda loo badinayaa in uu salka ku hayo maamulka Kooxda iyo Hadalkii Xidiga ee Muslimiinta China hadaba Ozil ayaa loo badinayaa in uu toos ugu biiro kooxda Fenerbahce ee wadanka turkiga waxana socda wada-hadal hoose.
Macalinta Arteta oo dusha laga saaray khilaafka jira ayaa jeclaan lahaa in xidigan lasoo ciyo inta ka harsan xili ciyaareedkan taasi oo aan suuragal aheyn.
Previous articleFinalka Manchester City Vs Tottenham: waqtiga la ciyaaridoono oo la shaaciyay
Next articleLiverpool oo ku biirtay loolanka loogu jiro kabtanka Real Madrid Sergio Ramos
Chelsea oo kalsooni ku qabta inay ku guuleysato tartanka Erling Braut Haaland’
Maxaa ku soo kordhay: Arsenal iyo Wararka Suuqa kala iibsiga ee Bisha January
Maxaa ku soo kordhay: Manchester United iyo Wararka Suuqa kala iibsiga ee Bisha January